श्रीमान साउदीमा पसिना बगाउँदै,यता नेपालमा श्रीमतीको फेसवुकमा अर्कैको घुम्टो ओढेको फोटो देखेपछी. (भिडियो) – Namaste Host
March 12, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on श्रीमान साउदीमा पसिना बगाउँदै,यता नेपालमा श्रीमतीको फेसवुकमा अर्कैको घुम्टो ओढेको फोटो देखेपछी. (भिडियो)
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका धेरै युवाहरुको घर उजाडीएको उदाहरण देखिएका छन् । युवकहरु खाडी मुलुकमा पसिना बगाएर काम गरिरहेका हुन्छन् । तर सन्तान लिएर गाउँमै बसेका श्रीमती भने पारिवारिक द’वाव, सामाजिक अपहे’लनाका कारण गलत बाटो अपनाएका थुप्रै उदाहरण छन् । कतिपय महिला आफ्नै स्वार्थले परिवार र श्रीमान छोडेर छुट्टै बाटो लागेको पनि देखिएको छ ।
आफ्नो मात्र कमाइले पुगेन भनेर कपडा सिलाउने काम गर्छु भनेपछि दमक गएर बस्न आफुले अनुमति दिएको उनको भनाई छ । विदेशमै गाडी चलाउने उनको गाडीले दु’र्घटना गराएपछि जे ल मा परेका थिए । जे ल वाट बाहिर निस्केपछि पनि राम्रोसंग कुराकानी भएको थियो । तर पछि आफुले अर्कैसंग गएको भन्ने खबर पाएको बताए ।
माइजु र भान्जालाई राती ११ बजे ओछ्यानमा नै फेला पारे गाउँलेले